မုဒုံမြို.၊မွန်ပြည်နယ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံတွင်ဗုံတစ်လုံးပေါက်ကွဲ၊ ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မုဒုံမြို.၊မွန်ပြည်နယ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံတွင်ဗုံတစ်လုံးပေါက်ကွဲ၊ ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိ	July 31, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံမုဒုံမြို.၊မွန်ပြည်နယ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးရုံတွင်ဗုံတစ်လုံးပေါက်ကွဲ၊ ဒဏ်ရာထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိ
ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လတွင်လည်း မုဒုံမြို့နယ် အစင်းရေလှောင်တမံဝင်းအတွင်းရှိ မြို့ပေါ်အစိုးရအရာရှိတစ်ဦး ဖွင့်လှစ်ထားသော လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့်နေအိမ်ကို ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ခတ်ဖောက်ခွဲ ခဲ့ဖူးသည့် ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့ကြောင်း Kaowao သို့ဖုန်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။ Bomb explodes in Telecommunication Office in Mudon
A bomb exploded near the Burmese military regime’s Central Agriculture Research and Training under the Ministry of Agriculture and Irrigation in Mudon Township, Mon State, Burma last night.
The authorities have not been able to identify the bomber yet. “It seems to be an internal affair and there were only three people present,” an observer from the town said.
In July last year,asmall bomb exploded inabrothel near the Azin Dam in Mudon. Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:Like Loading...